GNOME 3.14: Anyị na-enyocha desktọọpụ nke na-aga n'ihu | Site na Linux
GNOME 3.14: Anyị na-enyocha desktọọpụ nke na-aga n'ihu na-aga n'ihu
Dị ka anyị maraworị nwere wepụtara GNOME 3.14, Gburugburu Ebe Obibi nke na-achọghị ngosi ọ bụla na nke nta nke nta (dịka o mere na KDE 4.0) na-esi n'olulu nke ọ nọ na mmepụta nke GNOME Shell.
Na nyocha a, m ga-ekpughe echiche m banyere ụdị nke a GNOME na-anwa ikpa oke oke dika o kwere mee.
1 GNOME 3.14 Nyochaa: Nweta Foto Ule
2 GNOME 3.14 Nyochaa: General Data
3 GNOME 3.14 Nyochaa: Ọdịdị na Nhazi onwe
4 GNOME 3.14 Nyochaa: Ojiji
5 GNOME 3.14 Nyochaa: Ngwa
GNOME 3.14 Nyochaa: Nweta Foto Ule
Iji mee nyocha a, ejiri m nnwale nnwale nke ụmụ okorobịa nọ na GNOME nyere onye ọ bụla, nke karịrị 1GB karịa.
Budata GNOME 3.14
M tinyere oyiyi ahụ na osisi USB na iji iwu:
N'ezie, anyị ga-anọchi sdb site na otu nke kwekọrọ na ebe nchekwa USB anyị (nke a na-agaghị enwerịrị).
GNOME 3.14 Nyochaa: General Data
Ihe nlere a mgbe anyị malitere ọ na-ebupụta Ọkachamara na-atọ ụtọ nke ga-enyere anyị aka ịhazi asụsụ anyị, ndị obodo anyị, akaụntụ anyị dịpụrụ adịpụ na onye ọrụ anyị. Ka anyị lee ihe onyonyo a:
Mbụ anyị họrọ asụsụ anyị:
Ugbu a, anyị họrọ nhazi ihuenyo anyị. Ọ bụrụ na ọ bụghị nke ọ bụla gosipụtara na ihuenyo ahụ, pịa na ntụpọ 3 kwụ ọtọ na voila:
Anyị na-ahọrọ ebe anyị bi:
Anyị nwere ike iji akaụntụ anyị n'ịntanetị. N'oge a, m ga-ekwukwa na etinyere ha n'ụzọ ziri ezi, mana n'ule ahụ, ọ nyere m njehie ozugbo m banyere oge ahụ, na-ekwu na igodo isi agbanweela ma ọ bụghị nke anyị guzobere.
Ugbu a bụ akụkụ nke onye ọrụ anyị:
Mmalite nke nnọkọ ụlọ ọrụ na-atọ ụtọ, agbanyeghị na ekwesịrị ịhụ ya megide ụdị ngalaba ọ na - arụ ọrụ:
Na njikere niile 😉
Ọ bụrụ na enwere m mmasị na ihe ozugbo anyị rutere desktọọpụ, ọ bụ ndu mmeghe na GNOME 3.14, ebe anyị nwere ike ịhụ vidiyo 3 na-akụziri anyị akụkụ dị iche iche nke iji desktọọpụ, ma jikọta na ntuziaka na-anọghị n'ịntanetị. Tụọ ndị otu GNOME maka nke ahụ.
GNOME 3.14 Nyochaa: Ọdịdị na Nhazi onwe
GNOME y oS X ha na-e copomi ibe ha, nke ahụ enweghị m obi abụọ ọ bụla. Onye ọ bụla jiri OS X na nsụgharị ọhụrụ ya ga-ama ihe m na-ekwu. Chọpụta, ụfọdụ ihe gbanwere ma gwa eziokwu, ọ masịrị m etu GNOME si ele ihe anya.
Enwere ụfọdụ nkọwa m chere dị mkpa iji meziwanye, dịka ọmụmaatụ, enwere ngwa ndị na-ebu isiokwu ọkụ na ndị ọzọ (dị ka Foto) na isiokwu gbara ọchịchịrị. Ha abụọ na-ele anya nke ukwuu, mana m na-eche na mkpokọta agba siri ike ga-aka mma maka ihe niile.
Nkọwa ọzọ bụ na ọ ka na-ahụta na etinyere ụfọdụ ngwa maka mgbe anyị nwere ihuenyo mmetụ aka, mana ndị ọzọ abụghị. Kedu ka i siri mara? Ọ dị mfe, ngwa ndị e mere maka «na aka»Ọ bụ ndị ahụ na-ezochi nhọrọ ha masịrị na otu bọtịnụ na-esote aha mmanya. Ndị ọzọ na-amasị ọnụ, ha enweghị nhọrọ ahụ. Ọzọkwa, ịbụ ndị e mere maka ngwaọrụ emetụ, ụfọdụ bọtịnụ ma ọ bụ ogwe na-ala ọtụtụ ohere n'ihi nnukwu ha.
Nsogbu bụ isi na nke a bụ na GNOME na-ekwusi ike na ọ gaghị etinye ngwá ọrụ dị ka GNOME Tweak Ngwaọrụ ndabara iji hazie windo windo, agba, wdg.
Dịka ọmụmaatụ, ihe m na-agbanwe mgbe ọ bụla na desktọọpụ m bụ akara ndabara. Applicationsfọdụ ngwa na-ekwe ka ejiri aka mee ya, mana anyị enweghị ike ịme ya maka sistemụ niile.
Mana na-eleghara nkọwa ndị a anya, echere m na nsonaazụ ikpeazụ dị ezigbo mma yana ngalaba dị na ya Ọdịdị ị na-akpata ezigbo votu. Tebụl mara mma ma sie ike, nsonaazụ ya na ntụgharị ya dị ezigbo mma, mana ọ bụ ihe nwute na ọ funahụrụ akụkụ nke Nhazi. Ekwuru m na ihuenyo mkpọchi mara mma?
Have ga-eji slide na òké (ma ọ bụ mkpịsị aka) elu kpọghee ya ma tinye aha njirimara na paswọọdụ 😉
GNOME 3.14 Nyochaa: Ojiji
Ọ bụ ihe ihere na enweghị m ohere ịnwale GNOME 3.14 na ngwaọrụ emetụ, n'ihi na ọ nwere ike ịmatakwu otu mmegharị ahụ si arụ ọrụ.Ya mere, iji nweta ihe kachasị mma na Desktọpụ Gburugburu ebe a, ọ ga-adị mma ma ị mụta ụzọ mkpirisi keyboard, nke egosipụtara na enyemaka ahụ.
Ozugbo anyị mara keyboard, ọrụ ahụ ga-adị mma nke ukwuu na GNOME. Okwesiri ighota oru emere na mpaghara Usability / Accessibility ebe enwere otutu nhọrọ maka ndi nwere nkwarita n'otu uzo ma obu ozo.
GNOME 3.14 Nyochaa: Ngwa
Anyị abatala na ngalaba na-adọrọ mmasị. GNOME 3.14 gụnyere ngwa dị mma ma na imewe na arụmọrụ. Ihe atụ nke mbụ bụ ntinye ihu igwe, dị mfe, mara mma ma na-enye ozi zuru oke ma ọ bụ opekata mpe ihe dị mkpa.
Ngwa ọzọ nke masịrị m n'ezie bụ Maapụ, ebe ọ na-ebu oke ọsọ ma na-agagharị nke ọma.
Ilele Weebụ (Epiphany) na ilegharị anya na Safari bụ otu (ma ọ bụ otu ọzọ). Ọ bụ ezie na ihe nchọgharị ahụ kawanye mma n'ihe gbasara imepụta, ọ bụ naanị ngwa nke rapaara mgbe m mepere karịa otu taabụ.
gedit ọ ka dịkwa oke ederede ederede maka mmasị m, mana enweghị m ike ịgọnahụ na ọ dị jụụ na ntakịrị dị ka ngwa ahụ Ihe edeturu.
Otu n'ime ngwa ngwa, ngwa ngwa, ngwa ngwa, , Obi abụọ adịghị ya bụ Igbe (Igbe), nke na-enye anyị ohere ịmepụta igwe arụmọrụ anyị dị mfe:
Na ọfụma, na izugbe, ọ ga-ewe m ogologo oge iji kwuo n'ụzọ zuru ezu gbasara ngwa GNOME 3.14 niile, yabụ ana m akpọ gị oku ka ị nwaa ha ụzọ iji nweta mkpebi ka mma, nke mbụ. music y Video, nke emeela ka ọ dị mfe ma dị oke mma.
Nke a bụ akụkụ siri ike mgbe niile, dịka ọ dabere na ngwaike nke onye ọ bụla. Na a mebere igwe, oriri nke RAM na processor bụ mgbe niile a obere elu karịa kpọmkwem site USB na ebe nchekwa.
N’iburu nke ahụ n’uche, echere m na ozugbo awụnyere ya na PC, oriri mbụ kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 500MB nke RAM. Na mkpokọta, GNOME 3.14 na-arụ ọrụ nke ọma mgbe anyị nwere atụmatụ dị mma, agbanyeghị na m kwuru n'elu, ụfọdụ ngwa dịka Weebụ tụbara sistemụ m ntakịrị.
Enweghị m ike ị nweta nkwubi okwu ikpeazụ ruo mgbe m na-eji GNOME 3.14 ma ọ dịkarịa ala izu ole na ole na kọmputa m, yabụ m ga-echere ka ọ banye ebe nchekwa Archlinux siri ike. Ma ugbu a, enwere m ike ịhapụ echiche m na ihe nyocha a.
Ọ dị mma iji mụta ụzọ mkpirisi n'ihi na dịka ị maara, na GNOME anyị enweghị ndepụta nke ihe aga-eme na ngalaba ahụ. Nke a bụ isiokwu a tụlere ad nauseam, ma taa, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọrụ nwere ntụsara ahụ na desktọpụ a, echere m na ọ ka bụ eziokwu na ọ gbadoro anya na mpaghara nke GNOME anaghị enwu enwu, M Echere m ngwaọrụ emetụ.
Ngwa ahụ emeela ka ọ dị mma, mana ụfọdụ dịkwa mfe. Nautilus Ọ na-adị nnọọ ka ọrụ zuru oke ọ bụ ezie na ịdị mfe nke mmemme dị ka Igbe, M na-echeghị na ọ dị mma iji wepu nhọrọ ekpe na nri. Ọ ga-abụ oge na-adịghị mma kpọmkwem obere nhazi nke anyị na-ahụ na GNOME, ihe a na-ahụ anya mgbe anyị na-emegharị na Desktọpụ Ndị Ọzọ.
Mana n'aka nke ọzọ, enwere m mmasị n'ọdịdị (OSX) nke GNOME 3.14, yana ndozi ya n'ozuzu, yabụ echiche m bụ ihe ndị a:
[5 nke 5] Ọdịdị [/ 5 nke 5] [4 nke 5] Ojiji [/ 4 nke 5] [3 nke 5] [rụ ọrụ [/ 3 nke 5] [4 nke 5] Mfe maka ndị mbido [/ 4 nke 5] [3 nke 5] Nhazi nke mmadụ ] [3ụdị]
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » GNOME 3.14: Anyị na-enyocha desktọọpụ nke na-aga n'ihu na-aga n'ihu
Na ihe arụnyere, dị ka distro? Nọmalị gburugburu na-arụnyere na ndị ọzọ na distros dị ka debian, ubuntu, njiko na nchịkọta, ma ọ bụghị na ihe .iso
Ọ naghị awụnye dị ka m maara, ọ bụ naanị iji nwalee ya. O doro anya na ọ na-agba ọsọ na distro (rpm, amaghị m ma ọ ga-abụ Fedora ma ọ bụ OpenSUSE).
cat / wdg / redhat-ntọhapụ
Anọ m na-ele / wdg / mbipụta, Debian
sonyere m -a ???
Ọ bụ ihe mbụ m mere ma laghachi na GNOME dị ka distro 😛
ihe niile dị ndụ prod cd nke gnome 3 na-agba ọsọ na fedora.
Gnome, oge ọ bụla ọ pụtara na windo 8, gnome dị arọ ma na-echekwa usoro ahụ, ọ naghị ekwe ka ị hazie ihe ọ bụla.
Enwere m Sabayon na gnome 3, kedu ka m ga esi agbanwe ikike onye ọrụ?
Enyi, ajuju o nweghi ihe jikoro ya na post a. Iji mee nke a, ị nwere ike ịga na nnọkọ anyị ma ọ bụ chọọ blog maka isiokwu metụtara ikikere faịlụ na folda .. ..
Ndewo. Achọrọ m ịjụ. Nke a distro… Kedu ihe ọ bụ? gịnị ka ọ dabeere?
Enwere ike itinye ya ????
Ekele ma kelee gị nke ukwuu maka ndetu ahụ.
mmm nke ọma achọtaghị m ụzọ m ga-esi wụnye ya .. belụsọ na emere m dd nke ebe nchekwa ahụ na diski ike nke PC ma kwere m, agaghị m etinye ya n'ihe egwu hahaha. Daalụ
Akwa post. Ezigbo nyocha.
Maka ndị na-ege ntị na nkọwa ... a na-apụ apụ. Ga-akpachara anya karị, elav! 🙂
Shhh .. nwayoo nke ahụ bụ ihe nzuzo steeti hahahaha ..
A na-ejide gị
Echere m na ị pụtara na anyị amatala ebe ọ bi ...
Juaz! Nke ahụ abụghị .. 😛
Ehh… ọ bụghị kpọmkwem.
juo na Linux: O
Zaghachi na 2d
A ga-ehichapụ nkọwa ahụ na 3, 2, 1 ...
nke [/ 5of5]?
Anọ m na-eji Gnome 3.14 na Antergos maka ụbọchị ole na ole ma dịkwa ezigbo mma na ụfọdụ mgbanwe na-aga nke ọma. Ọ masịrị m.
Ewezuga mmemme ole na ole na-anaghị arụ ọrụ m na ụdị a, yana ndọtị ndị ọzọ, nke na-amaliteworị imelite maka 3.14, ndị ọzọ dị mma.
Nchịkọta kachasị, GTK 3.14 mara mma na ọnụma, Adwaita na-ekpuchi ya.
Gnome 3.14, enwere m ike ịgwa gị fap fap fap ...
Mike J Karels dijo
Na-eme karịa fap, fap, fap maka Antergos ma ọ bụghị maka GNOME 3.14: trollface:
Zaghachi Mike J. Karels
Ihe na-adọrọ mmasị ị ga-ahụ bụ na ọ nwekwara ike ịpụ na mkpọchi mkpọchi naanị site na ịpị ịbanye kama iji ihuenyo ahụ
Ezi nyocha, enwere m obi ụtọ ịmara na Gnome na-emeziwanye naanị ihe na-adịghị m mma bụ na ọtụtụ ohere furu efu.
Site n'ụzọ, amaghị m ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ... Gnome enwere ike iji ya na igwe nke nwere Windows 8-8.1 ma na-emetụ aka?
Ee, ọ nwere ike, e mere ya maka nke ahụ.
O doro anya na ị ga-ahụ ma nkesa Gnu / Linux ị nwere ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa iji mata ngwaike nke akụrụngwa gị na w8, mana nke ahụ adabereghị na Gnome.
Gnome, ya onwe ya, nwere ihe ọ bụla iji rụọ ọrụ na ihuenyo ọ bụla, yabụ echegbula nke ahụ, ị ​​ga - ahụ naanị ma ọ bụrụ na ịnweghị onye ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ ihe ọ bụla ị nwere.
sev cute na-ewute isi menu soro mbadamba
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ha enye nhọrọ abụọ: onye chọrọ interface "tocuh" na onye chọrọ desktọọpụ ọdịnala.
Ma mgbe ụfọdụ ihe ọ na-arụ ọrụ maka ọdịnala ọdịnala, ọtụtụ n'ime ya bụ ihe ndị nwere ezi uche na "ihuenyo mmetụ".
Nchịkọta ahụ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ, n'elu ị nweghị ike ịhụ aha aha nke ngwa ahụ, ịnweghị ike nyocha site n'ụdị ma ọ bụ na balloon ọbụlagodi ịgwa gị aha nke ngwa
Ọfọn, ọ dị oke mma (nke ọma, ọ bụghị dị ka ọ dị na ndabara na Antergos 😛). Ihe masịrị m bụ Igbe, ọ ga-amasị m ịnwale isos-android-x86 nke m kwadoro. Nke ọzọ, ọ ga-amasị m ịhụ ihe yiri nke Maps mana na Cinnamon, maka oge ahụ afọ juru m afọ na xD ihu igwe. Enwere ike mgbe Cinnamon gbụrụ m, m ga-anwale Gnome Shell ọhụrụ a.
Ezi nyochaa 🙂
Ajuju enyi m: Mmemme eserese, kedu igwe o na-eji maapu? Googlemaps? mmeghe
Enwere m olileanya na ị nwere ike ịza m, akụkọ magburu onwe ya n'ụzọ.
OSM (Open Street Map) .. 😉
Etu esi etinye gnome 3.14 na LinuxMint? Nihi na eziokwu abughi m ike ime ya, ọ di ka m enweghi ekwesiri na ụfọdụ ngwugwu ihe ihere n'ihi na gnome na arch na agba oso oso ma na agile.Ekele dịrị m n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na mmadụ mara etu esi eduzi m.
Ariel S. dijo
Adị m onye Gnome mgbe niile, ma ọnwa ole na ole gara aga, ọnwa ole na ole, agbalịrị m KDE, agbalịrị m ya ọtụtụ ugboro tupu mgbe ahụ, ọ nweghịkwa mgbe m kwenyesiri ike, mana o jisiri ike mee ka m kwenye na ọ bụ n'ihi obere nhazi nke GNOME3 na-ebu, nke ahụ bụ ọghọm nke m mechara hapụ ya, ọ bụ n'ezie onye na-anụ ọkụ n'obi.
Anọgidere m na-agụ mgbanwe ya iji hụ ma ọ dị mgbe m ga-enye ya ohere ọzọ.
Zaghachi Ariel S
Nnukwu GNOME, ejiri m ya na mbụ, mana ebe Slackware kwụsịrị gụnyere ya, akwụsịrị m iji ya, oke akụ ọ na-erepịa m na-eme ka m mara, ọ eruolarị na KDE.
Zaghachi Oscar Meza
melite ubuntu gnome 3.13 ka gnome 3.14 ma m hichapụ okwuntughe, ugbu a na-anọpụ iche kedu ihe m ga - eme iji dozie ikpe ahụ. Daalụ..
Ikwesiri ịbụ onye nzuzu iji nwee mmasị na GNOME 3 na ọbụlagodi ka ị na-agagharị na-ekwu ya. Ma otu ihe ahụ na Macs na OS X. Ọbụna Linux Torvalds n’onwe ya ekwuola na “gnome” bụ ihe mkpofu.
Ka anyị hụ ma ọ bụrụ na ị chọpụta na ozugbo na ịdị mfe na usability bụ antagonists.
Fack gị, GNOME 3 !!!!
Ikwesiri ịbụ onye nzuzu na-amasị GNOME 3 na ọbụlagodi ka ị na-agagharị na-ekwu ya. Na otu aka maka OS X. Ọbụnadị Linus Torvalds n'onwe ya ekwuola na gnome 3 bụ ihe mkpofu.
Ka anyị hụ mgbe ịchọtara ozugbo na ịdị mfe na ojiji bụ ezigbo ndị iro.
M arụnyere MATE ọ na-aga were were. Enweghị m mmasị na ọ gbanwere ụfọdụ ngwa maka ndị ọzọ nke fọrọ nke nta ka ha hara ma pere mpe (gedit maka pen, dolphin maka igbe, wdg, mana ọzọ karịa nke ahụ, ọ bụ ijeri oge kachasị mma karịa 3 shit.
Android Studio (ma ọ bụ ADT) na KDE na-enweghị ịnwụ ọnwụnwa
Freedombọchị Nnwere Onwe Software - 2014